Mombamomba An’i Kirghizistan
Mifohaza! | No. 4 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Ourdou Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tranolay antsoina hoe yourte any amin’ny Lohasahan’i Tach Rabat
ANY Azia Afovoany no misy an’i Kirghizistan, izany hoe eo anelanelan’i Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, ary Chine. Voahodidina tendrombohitra avo rakotra ranomandry izy io. Efa ho ny 90 isan-jaton’ilay tany no feno tendrombohitra. Any no misy ny tendrony avo indrindra amin’ilay tandavan-tendrombohitra atao hoe Tian Shan. Mirefy 7 439 metatra ambonin’ny haabon’ny ranomasina izy io. Rakotra ala ny 4 isan-jaton’ny velaran-tanin’i Kirghizistan. Tsara homarihina anefa fa ny alana noaie any no anisan’ny midadasika indrindra eran-tany.
Mitarika fampianarana Baiboly amin’ny olona an’arivony ny Vavolombelon’i Jehovah any Kirghizistan
Tia mandray vahiny ny mponina any sady manaja olona. Hafa ny mpisolo anarana ampiasainy, rehefa miresaka amin’ny olon-dehibe. Omeny toerana ny zokiolona rehefa ao anaty fitateram-bahoaka. Ny toerana mihaja indrindra koa no omeny azy rehefa misakafo.
Manan-janaka telo na mihoatra ny ankamaroan’ny mpivady. Ny faralahy mazàna no miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreniny, na dia efa manambady aza, mba hikarakara azy ireo rehefa antitra.
Mbola kely ny ankizivavy dia efa ampianarina hikarakara tokantrano. Efa mahay tsara an’izany izy rehefa feno 15 taona eo ho eo. Mazàna no ampitondraina haren-jazavavy ny vehivavy rehefa hanambady. Anisan’izany ny lambam-pandriana isan-karazany, fitafiana samihafa, ary karipetra natao tanana. Ny mpampakatra kosa manome vodiondry, izay tsy inona fa vola sy biby fiompy.
Mamono ondry na soavaly ny mponina any rehefa fety na rehefa misy maty. Tetitetehina ilay hena avy eo, ary efa misy fomba itsinjarana azy io. Arakaraka ny taonan’ny vahiny sy ny toerana tanany ny anjara omena azy. Mari-panajana daholo izany! Aroso avy eo ny beshbarmak, izay sakafo mampiavaka an’io tany io. Hena tetehina manify ampiarahina amin’ny paty izy io, ary hanina amin’ny tanana.
Zavamaneno be mpitia ny komuz
Efa misy amin’ny teny kirghiz ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Azo jerena ao amin’ny Internet koa io boky io, ao amin’ny www.jw.org
Mponina: 5 776 000
Fiteny: Kirghiz, rosianina
Zavatra aondrana: Landihazo, volonondry, volamena, volavelona na merkiora, ioraniôma
Fivavahana: Silamo (80 isan-jaton’ny mponina)
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Kirghizistan
MATOAN-DAHATSORATRA Ahoana no Hananana Fahazarana Tsara?
MATOAN-DAHATSORATRA 1 Mahaiza Mandanjalanja
MATOAN-DAHATSORATRA 2 Manaova Zavatra Mialoha
MATOAN-DAHATSORATRA 3 Aza Mora Kivy
HO AN’NY FIANAKAVIANA Ahoana no Hiatrehana Fiovana?
TANY SY MPONINA Fitsidihana An’i Kirghizistan
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Hatsaran-tarehy
NISY NAMORONA VE? Ny Tsingerim-piainan’ny Jorery
Miezaha mba Tsy Hifamaly
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Ahoana no Hananana Fahazarana Tsara?
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! Ahoana no Hananana Fahazarana Tsara?
Hizara Hizara MIFOHAZA! Ahoana no Hananana Fahazarana Tsara?
Ahoana no Hananana Fahazarana Tsara?
MIFOHAZA! Ahoana no Hananana Fahazarana Tsara?